कार्य गर्न कल: एक CTA के हो? तपाईं कसरी तिनीहरूको प्रभावकारिता बढाउन सक्नुहुन्छ?
यो स्पष्ट देखिन्छ जब तपाइँ प्रश्न सोध्नुहुन्छ, कार्यमा कल भनेको के हो वा सीटीए, तर यो प्राय जसो हराएको अवसर वा दुरुपयोग गरिएको अवसर हो ड्राइभरहरू, श्रोताहरूलाई, र अनुयायीहरूलाई तपाईंको ब्रान्डको साथ गहिरो सment्लग्नतामा ड्राइभ गर्न।
कार्य गर्न कल भनेको के हो?
कार्यमा कल सामान्यतया पर्दाको क्षेत्रको रूपमा हुन्छ जुन एक ब्राण्डको साथ फर्टरलाई संलग्न गर्नको लागि क्लिक-थ्रू गर्न पाठकलाई ड्राइभ गर्दछ। कहिलेकाँही यो तस्बिर हो, कहिलेकाहीँ केवल एक बटन, अन्य पटक डिजिटल सम्पत्तिको आरक्षित सेक्सन। यो केवल साइटहरू होईन जुन कार्य गर्न कल गर्न सक्दछ, वस्तुतः हरेक प्रकारको सामग्री (र अधिक हुनु पर्छ)।
अन्तिम भाषणमा मैले एक स्थानीय नेटवर्कि event कार्यक्रममा दिएँ, मैले मानिसहरूलाई नि: शुल्क टेक्स्टद्वारा नि: शुल्क न्यूजलेटरमा साइन अप गर्न प्रस्ताव गरे मार्केटिङ लाई 71813१XNUMX१ to - an कार्यमा प्रभावकारी कल किनकि विषय प्रासंगिक थियो र सबैको भाषणको बखत उनीहरूको मोबाइल फोन थियो। हामीले साइटमा जान र सदस्यता लिनको लागि मानिसहरूलाई भन्दा उनीहरूमा हामीले राम्रो प्रतिक्रिया देख्यौं।
वेबिनारहरूसँग कार्य गर्न कल हुन सक्छ (र हुनुपर्दछ), इन्फोग्राफिक्सको प्रभावकारी हुनुपर्दछ कार्यलाई कल गर्नुहोस् (विडंबना तल लेखिएको छ कि लेखक को लागी अवसर गुमायो!), र प्रस्तुतीकरण पनि। मेरो एक सहकर्मीले सधैं आफ्नो प्रस्तुतीकरणहरूको अन्त्यमा ट्रेडिंग व्यापार कार्डको लागि सट्टामा निःशुल्क सस्ता प्रस्ताव गर्थे - शानदार कार्य गरे। कसैलाई एक डाउनलोड, दर्ता, एक फोन कल, वा अन्य सम्बन्धित लेखमा धक्का दिईएको महान सीटीए हुन सक्छ।
के सबै कार्य गर्न कल गर्नु पर्छ?
तपाइँले सामग्रीको धेरै टुक्राहरू फेला पार्न सक्नुहुने छैन जुन हामीले उत्पादन गर्ने कार्यमा कल छैन, तर हामी यस बिना एक टन सामग्री साझा गर्छौं। तपाईले गर्नुहुने सबै कुरा बेच्न कोशिस गर्नु हुँदैन, यस मध्ये केही लिड र ग्राहकहरूको साथ दुबै विश्वास र अख्तियार निर्माण गर्न कोशिस गर्नुपर्दछ। सधैं बेच्न सबै भन्दा बिक्री र मार्केटिंग रणनीतिहरु मा एक मंत्र हुन सक्छ, तर बिक्री पनि केहि कुराकानी मा एक मोड हुन सक्छ। मेरो औंठाको नियम छ सधैं एक कार्य गर्न कल छ जब तपाईंको लक्ष्य व्यक्तिलाई गहिरो सment्लग्नतामा उत्प्रेरित गर्नु हो।
कसरी कार्य गर्न प्रभावी कलहरू सिर्जना गर्ने
कार्य रणनीतिमा प्रभावी कल डिप्लोय गर्नका लागि प्रमाणित विधिहरू छन्। यहाँ तिनीहरू मध्ये केही छन्:
तपाईको कलहरुलाई कार्यमा अत्यधिक दृश्यात्मक राख्नुहोस् - सीटीए को लागी प्लेसमेन्ट आसन्न वा पाठकको ध्यान संग लाइन मा हुनु पर्छ। हामी अक्सर हामीले लिइरहेका सामग्रीको दायाँ सीटीए राख्छौं ताकि दर्शकहरूले प्राकृतिक आँखा चालले यसलाई समात्न। हामी तिनीहरूलाई सामग्री स्ट्रिममा अलि बढि धक्का दिन सक्नेछौं भविष्यमा यसलाई निचुर बनाउन। केहि साइटहरूले सीटीए फ्लोट गर्दछ ताकि पाठक स्क्रोलहरूको रूपमा, सीटीए तिनीहरूसँग रहन्छ।
तपाईका कलहरूलाई कार्यमा सरल राख्नुहोस् - यो छवि हो वा तपाईंको बोलीमा प्रस्ताव, निर्देशनहरू सरल छन् भन्ने सुनिश्चित गर्दै, र स engage्लग्नताको लागि बाटो सजिलो छ तपाईंको दर्शकहरूको एक उच्च संख्यामा कल गर्नेछ, वा तपाईंले सोध्नु भएको कार्यमा क्लिक-थ्रू सुनिश्चित गर्दछ। एक छवि आधारित CTA सामान्यतया एक छ
तपाईंको सीटीएमा कार्य स्पष्ट राख्नुहोस्। कल, डाउनलोड, क्लिक, रेजिस्टर, सुरु, आदि जस्तै कार्य शब्दहरूको उपयोग गर्नु पर्छ। यदि यो तस्विरमा आधारित CTA हो भने तपाईले तिनीहरूलाई प्राय अत्यधिक विवादास्पद बटनमा फेला पार्नुहुनेछ। वेब प्रयोगकर्ताहरूलाई बटनमा क्लिक गर्न शिक्षित गरिएको छ, त्यसैले छवि स्वचालित रूपमा तिनीहरू लिनको लागि गतिविधिको रूपमा दर्ता हुन्छ।
तत्कालको भाव जोड्नुहोस् - के समय सकियो? के प्रस्तावको समयावधि सकिन्छ? त्यहाँ सिटहरूको संख्या सीमित छ? पाठकलाई पछ्याउनको लागि पछाडि कदम चाल्नुको सट्टामा केहि पनी पछि तपाईको रूपान्तरण दर बढाउँदछ। जरुरीताको भावना थप्नु प्रत्येक सीटीएको महत्वपूर्ण घटक हो।
सुविधाहरूमा पुश बेनिफिटहरू - धेरै कम्पनीहरूले गर्व गर्छन् उनीहरू आफ्नो ग्राहकहरूको लागि प्राप्त गर्ने लाभहरूको सट्टामा के गर्छन्। यो तपाईं के बेचेर के छैन; यो लाभ हो कि एक ग्राहक लाई खरीद गर्न लोभ्याउँछ। के तपाइँ चीजहरू सरलीकृत गर्न को लागी एक अवसर प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ? तत्काल परिणामहरू प्राप्त गर्न? नि: शुल्क सल्लाह प्राप्त गर्न?
रूपान्तरणको लागि योजना बनाउनुहोस् - ब्लग पोष्टहरूका लागि, पथ प्राय: पढिएको हुन्छ, एक सीटीए हेर्नुहोस्, अवतरण पृष्ठमा दर्ता गर्नुहोस्, र रूपान्तरण गर्नुहोस्। रूपान्तरण गर्न को लागी तपाइँको मार्ग फरक हुन सक्छ तर भिजुअलाइज गर्ने र मार्ग योजना गर्ने जुन तपाइँले आफ्नो सामग्रीको साथ लिन चाहानुहुन्छ यसले तपाईंलाई अझ राम्रो डिजाईन गर्न मद्दत गर्दछ र तपाईंको कल टु एक्शन रणनीतिको साथ अधिक रूपान्तरण गर्दछ।
तपाईंको CTAs परीक्षण गर्नुहोस् - तपाईको CTAs को बहु संस्करणहरू डिजाइन गर्नुहोस् कुन एकले राम्रो व्यापार परिणामहरू ड्राइभ गर्नका लागि। एउटा मात्र पर्याप्त छैन - धेरै कम्पनीहरूले वैकल्पिक डिजाइन, भार्बियाज, रंग, र आकारहरू प्रदान गर्न समय लिदैनन्। कहिलेकाँही एक साधारण वाक्य उत्तम हुन्छ, अन्य पटक यो एनिमेटेड gif हुन सक्छ।
तपाइँको अफरहरूको परीक्षण गर्नुहोस् - नि: शुल्क परीक्षण, नि: शुल्क शिपिंग, १००% सन्तुष्टि ग्यारेन्टी, छुट ... तपाईंले रूपान्तरणमा बृद्धि गर्न विभिन्न प्रस्तावहरूको चयन प्रयास गर्नुपर्नेछ। निश्चित रूपमा ग्राहक प्रतिधारणको सन्दर्भमा ती प्रस्तावहरूको समग्र प्रभावकारिता नाप्नुहोस्। धेरै कम्पनीहरूले आफ्नो करारको अन्त्यमा ग्राहकलाई हराउन मात्रै ठाडो छुट प्रदान गर्दछ।
हामीले अरूको लागि साझेदारी गरेको अर्को इन्फोग्राफिक जाँच गर्नुहोस् गर्नुहोस् र प्रभावी कल-टु-एक्शनको गर्नुहुन्न.
टैग: एनिमेटेड gifकार्यलाई कल गर्नुहोस्कार्य रंगमा कल गर्नुहोस्कार्य स्थानमा कल गर्नुहोस्कार्य आकारमा कल गर्नुहोस्कार्य आकारमा कल गर्नुहोस्कार्य verbiage गर्न कलकार्य शब्दहरूमा कल गर्नुहोस्ctaCTA बटनहरूcta स्थानcta आकारcta आकारcta शब्दहरू
फ्ल्यारी: मोबाइल अनुप्रयोगहरूको लागि वास्तविक-समय एनालिटिक्स
मई 5, 2015 मा 9: 08 एएम
एक प्रभावी CTA अभियान को लागी सल्लाह साझा गर्न को लागी धन्यवाद। राम्रो परिणामको लागि लेआउट र पृष्ठ र color्गको वास्तवमै धेरै चयन हुन्छ। मैले धेरै अभियान प्रबन्ध गरेको छु र यो साँच्चिकै काम गर्दछ।
यो ट्रेडिंग रणनीति ebook प्रचार ईमेल अभियान को एक उत्कृष्ट कल को एक्शन छ। सामान्यको सट्टा "म यो चाहन्छु" वा "अब डाउनलोड गर्नुहोस्!"। यसले दर्शकहरूलाई यसको गजबको साथ कब्जा गर्यो "लामो जानुहोस्!"बटन CTA पाठ।
मलाई यो मनपर्‍यो किनभने यो ebook को सामग्रीसँग सान्दर्भिक छ (अन्तर्राष्ट्रिय स्टकहरू र US ADR मा सहसंबद्ध मूल्य आन्दोलन बजार खुल्नु अघि ठीक मूल्यको भविष्यवाणी गर्न प्रयोग गर्नुहोस्।) र यसको दर्शक, जुन मुख्यतया शेयर बजारका व्यापारीहरू र उत्साही हुन्छन्। यो पता लगाऊ यहाँ.